Daawwo Sawrio :-Muqdisho iyo wejiga dhab ah ee ay iminka leedahay. – Shabakadda Amiirnuur
April 17, 2021 2:42 pm by admin Views: 203
Colaad ayaa ka dhex jirta Dowladda Federaalka ah iyadoo Ciidamaeedi qaarkood dhufeyso waaweyn ka shameysteen Xaafadda Shiirkoole ee Degmada Hodon halkasoo ay joogaan Ciidamo ka amar qaata Taliyihii horee Baliiska Gobalka Banaadir Saadaq joon oo Madaxweyne Famraajo xilkii iyo derejooyinki Ciidanba ka qaaday.
Ciidamadaan ayaa xirtay jidadka Xaafadda soo gala waxayna dabaqyada la fuuleen qoryaha dabajeexyada iyo dhashiikaha si ay isaga difaacaan haddii ay Soo weeraraan Ciidamada ka amar qaata Madaxweynaha Xilka ku mintidaya Maxamed Cabdullaahi Famraajo.
Xildhibaano ka tirsan Dowladda federaalka ah ayaa Xalay ilaa Maanta ku qulqulayay Shiirkoole waxaana shir jaraa’id oo ay qarkood qabteen ku sheegeen in Farmaajo yahay dagaal ooge ee aanuu Madaxwyne ahayn in la iska dhiciyana mudan yahay.
Xalay Farmaajo waxa uu isku dayay in uu weeraro Ciidamada Shirkoole degay waxaana is rasaasayn kooban ku dhimatay qof dumar ah intaa kadibna ma dhicin dagaal weyn sababtoo ah Dowladda federalak ah ayaa ka baqday in xaalku ku xumaado oo dagaal ku daba dheeraado gurmad badana cadawgeedu helaan.
Saadaq joon oo sida muqata xariir adag la yeeshay Mucaaradka intii xilka hayay ayaa ka biyo diiday in Madaxweynuhu waqtiga kororsado waxayna taasu keentay in Xilka iyo derejoyinka laga qaado qaran dumisna Madaxweynuhu ugu yeero.
intaa kadab Taliyahaan oo wata Ciidamo ka tirsanaa Dowladda federaalka ah iyo Gaadiid dagalkaa ayaa u diyaar garoobay dagaal farmaajo ka dhan ah.
Farmaajo waxaa ka go’an in uu la dagaalamo cid waliba oo qorshihiisa waqti kororsiga ah ka hor timaada halka Mucaaradkuna geestooda ay jecel yihiin in uu bilowdo dagaal sababa in Farmaajo Meesha ka baxo ama awoodiisu hoos u dhacdo.
waxa loogu yeero Beesha Caalamka ayaa Farmaajo u jeediyay eedeymo kulul iyagoo sheegaya in ay ka soo horjeedaan waqti kororsigiisa laakiin ma cadda haddii eedeymahaasu dhab ka yihiin